Vagari Voramba Kutambira Bhajeti reGuta reGweru ra2018
Gumiguru 23, 2017
Chikwangwari cheguta reGweru
Sangano revagari vemuGweru, reGweru Residents Forum, rinoti harisi kutambira hurongwa hwebhajeti regore rinouya hwakashambadzwa nekanzuru yavo hwemari inoita $38 million, vachiti huri kutungamidza mberi zvido zvevakuru vekanzuru, kwete zvevagari.
Mukuru wesangano revagari, VaCharles Mazorodze, vanoti mushure mekunan’anidza bhajeti iri vakaona kuti kanzuru iri kuda kumanikidzira kupinza dzimwe nyaya nerweseri dzakaita senyaya yema pre-paid water meter.
Vanoti danho rekuisa mamita emvura iri rinorwadza varombo zvakanyanya nekuti vanoziva kuti mamita aya achaiswa mumisha inogara veruzhinji, kunyange hazvo vagari vakazviramba kare.
VaMazorodze vanoti kanzuru yakanga yati haisi kuzoshandura mamiriro ebhajeti ra2017 mubhajeti rayo ra2018 asi vave kushamisika kunzwa kuti kanzuru iri kuronga kukwidza zvakanyanya mitero yezvivakwa, kuda pamwe nekuronga kutenga maketeni anodhura.
Vanoti vave kuronga kusangana nevagari zvakare vasati vadzokera kukanzuru kuti vaipire zvinyunyuto zvavo.
Hurukuro naVaCharles Mazorodze